प्रकाश भण्डारी “बिवेक ” । शनिबार छापामा प्रकाशित समाचारले एकाएक शरीरमा काँडा उठायो। मन भावुक बनाउँदै, आँखाबाट गालाकै सहायताबाट भुँईमा चुहिन बाँकी टिलपिल आँशुले काला अक्षर झनै धमिला देख्दै छु। समाचारका एक एक शब्द केलाएर पढेँ। मनै भावुक बनायो। निस्शब्द छु। म एक नेपाली नागरिक भएर पनि केही गर्न सकेनछु। किनकी म पनि त एक कर्णालीका तपाईँहरू भन्दा शिक्षित नागरिक हुँ, सुगममा छु भन्ने हौवामै गर्व गर्दथेँ। अब गर्व गर्न लायक रहिन।
कर्णालीका जनताप्रति प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार अलि बढि चनाखो र जिम्मेबारी बोकेर अगाडी बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रत्येक बर्ष बिनियोजन हुने बजेटमा कर्णालीको नाम छुने मात्र हैन बास्तविक कर्णाली बासीका मन छुने प्रयास गरियोस।चुनाव त फेरि पनि आउला? यो परिस्थितलाई साम्य पार्न सक्यौ भने सरकार अर्कोपटकलाई भोट माग्न लाज मान्नुपर्देन कि ? एक दिन तपाईँ कर्णाली बासिकै सेवामा समर्पित हुँदै तपाईहरूको आँशु पुछ्न सकुँ। पशुपतिनाथले हजुरहरूको कल्याण गरून।
पोखरा विजयपुरमा चिनिया कम्पनीले पुनः बनायो डाइभर्सन
राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारीमा उद्योग वाणिज्य संघ